म यो सबै गर्न सक्दिन! | Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 9, 2011 शुक्रबार, डिसेम्बर 9, 2011 Lavon मन्दिर
जब यो बिदाको वरिपरि हुन्छ, तपाईं धेरै धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूले दिनमा दुई घण्टा कसरी प्रयोग गर्न सक्दछन् भनेर सुन्नुहुनेछ। वा यदि तिनीहरू आफैं क्लोन गर्न सक्थे भने, तिनीहरू दुई ठाउँमा एकैचोटि हुन सक्छन् र धेरै बढी उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछन्। उही सम्भावित मार्केटरहरू द्वारा भन्न सकिन्छ र उनीहरूको ईमेल प्रोग्रामहरूको बारेमा उनीहरूले कस्तो महसुस गर्छन्। धेरै कम्पनीहरूसँग इ-मेल मार्केटर्सको पूर्ण टीमको लग्जरी हुँदैन र एक व्यक्ति वा केही मानिसमा भर पर्न बाध्य छ उनीहरूको सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रबन्ध गर्न।
म यो पाउँदछु, त्यसो भए मलाई केहि विचारहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई अनुभव गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्दछ कि यदि तपाईंसँग एक पूरा मार्केटिंग टीम छ तपाईंको कार्यक्रमको सट्टामा आफैंको ब्यवस्थापकहरूको द्वारा प्रबन्ध गरिएको छ। धेरै कम्पनीहरूसँग इ-मेल मार्केटर्सको सम्पूर्ण टीमको लग्जरी हुँदैन र एक व्यक्ति वा केही मानिसमा भर पर्न बाध्य छ उनीहरूको सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रबन्ध गर्न।
सेट अप मेलिंग क्यालेन्डरहरू व्यवस्थित रहनको लागि एक उत्तम तरिका हो, तर तपाईंलाई अघि योजना बनाउनमा मद्दत गर्दछ। तपाईको दर्शकलाई कति पटक पठाउन चाहानुहुन्छ निर्धारण गर्नुहोस् र क्यालेन्डरमा यसमा नोट राख्नुहोस्। तपाईं जहाँसम्म पठाउनको लागि के योजना बनाउने निर्णयको रूपमा तपाईं जान सक्नुहुनेछ।
टेम्पलेट्स र सामग्री पुस्तकालयों तपाइँले तपाइँको सामग्री क्यालेन्डरमा राख्नु भएको र आयोजित जानकारी लिन मद्दत पुर्‍याउनुहोस् र सिर्जना गर्न सुरू गर्नुहोस्। तपाईंको खाली समयमा थुप्रै टेम्प्लेटहरू सिर्जना गर्नुहोस् हातमा हुनको लागि जब तपाईंसँग भविष्यमा बाहिर जानको लागि एक मेलिंग हुन्छ र तपाईं समयको लागि संकुचित हुनुहुन्छ।
स्वत: जवाफ केहि घटनाहरू स्वत: प्रतिक्रिया गर्न सेट अप गर्न सकिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि कसैले तपाइँको मेलिंग सूची को लागी सदस्यता लिन्छ भने, तपाइँ पठाउन एक स्वचालित ईमेल सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ जुन उनलाई स्वागत गर्दछ र तिनीहरूलाई कार्यमा अन्य कलहरू दिन्छ।
तपाईं यी उपकरणहरू तपाईंको ईमेल मार्केटिंग प्रयासहरू बृद्धि गर्न र तपाईंको दर्शकहरूलाई थप पर्याप्त ईमेल प्रोग्राम दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर यस्तो महसुस बिना तपाईं यो सबै गर्न सक्नुहुन्न। यसको सट्टामा, तपाईलाई ती सम्पूर्ण राम्रा ईमेलहरू क्र्यान्क गर्न सम्पूर्ण टीमले सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ!
टैग: autorespondersसामग्री पुस्तकालयहरुमेलिंग क्यालेन्डरहरू
शीर्ष २० मार्केटिंग स्वचालन समाधान
डिसेम्बर १, २०१92011:२:12 अपराह्न
महान पोष्ट, @lavon_temple: ट्विटर! यो हप्ता ती हप्ताहरू मध्ये एक हो जहाँ मैले शाब्दिक रूपमा बिर्सें जुन कुन दिन थियो। यो वर्षको अन्ततिर हामी वास्तवमै झन् खराब हुँदै गएको देखिन्छ - कम्पनीहरूले उनीहरूको वर्षको अन्तका स button्लग्नताहरूलाई बटन दिन र जनवरीमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वाह ... हामी दलदलित छौं।
मलाई क्यालेन्डरहरू मेल गर्ने विचार मनपर्छ। यदि तपाईं अन्तिम लो-टेक तरीकाले गर्नुहुन्छ (ठूलो पर्खाल क्यालेन्डर), यसले तपाईंको प्लेट खाली गर्न र अन्य चीजहरूमा तपाईंको दिमाग प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।